Ciidanka Uganda ee ku jira howlgalka AMISOM oo ka cabanaya nol... | Universal Somali TV
Ciidanka Uganda ee ku jira howlgalka AMISOM oo ka cabanaya nolol aad u liidata oo ku heysata furumaha dagaalka ee Soomaaliya.
Ciidanka ka socda Dalka Uganda eek u jira howlgalka AMISOM ayaa ka cabanaya nolol aad u liidata oo ku heysata furumaha dagaalka ee Soomaaliya.
Wargeyska Daily Monitor ee ka soo baxa dalka Uganda ayaa wareysi la yeeshay qaar ka mid ah askarta oo si dhab ah uga sheekeeyay waxa ku heysta gudaha Soomaaliya.
Nolisha adag ee ku heysata furunta hore ee Gobolka Shabeellaha hoose ayaa waxaa ka mid ah; adeegga raashinka oo dib u dhaca,musqulo iyo Saabuun la’aan.
Askari ka mid ah howlgalka oo diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in marka ay doonayaan in ay raashin karsadaan ay qoryaha lagu karsado raashinka ka doontaan duurka,halkaas ay kala kulmaan Qatar dhinaca amaanka ah.
Waxaa uu sheegay in geerida ay qof kasta sugeyso laakiin,marka aad ogtahay in aad dhimaneyso waqti dhow ay dhibkeeda iyo walwalkeeda leedahay,gaar ahaan gacanta AL-shabaab oo ay dagaal kula jiraan.
“Halkan dhimashada waxaa ay kuu jirtaa kaliya hal daqiiqo,sababta oo ah ma taqaanid cidda aad la dagaaleyso,sababta oo ah cadowga iyo dadka rayidka ah ayaa isu eg”.
Waxaa la joogaa qatiga cashada laakiin Odongo,kama soo boxo qolka uu ka degganyahay xerada, hoos ayuu ka xirtay,waxaa uu ka fakarayaa xusuusta qoyskiisa oo uusan ka warqabin.
Saddex bilood ka hor ayaa la siiyay mushaar,kaddibna ma arag wax mushaar ah,waana la joojiyay isaga oo aan heysan sharaxaadda sababta loo joojiyay.
Odongo,waxaa uu yiri “waxaan halkan joogaa lix bilood,mana sugi karo xilliga aan dib ugu laaban lahaa dalkeyga”.
Waa 36 jir,waxaa dagaal ku jiray waxbadan inta uusan iman Soomaaliya,waxaa uu sheegayaa in ay Soomaaliya ka duwan tahay meelihii uu ka soo shaqeeyay.
Weerarradii mataanaha ahaa ee April lagu qaaday saldhigyada AMISOM ee Buulo Mareer iyo Gowayn,waxaa ku dhintay walaalkii iyo kuwo kale,saaxiibadiina waa ay dhaawacmeen.
“waxaa furay albaabka qolkeyga mise Doolli ayaa ka soo booday oo waliba ii dhaafay dhinaca sariirteyda,waxaan ka shakiyay in sheeko socoto oo qof kale dhegeysanayo”.
“10 daqiiqo kaddib waxaa ii yimid saaxiibkey Jimmy,waxaa sariirta ii saaran sawirro dhowr ah” ayuu yiri Odongo.
Wargeysku waxaa uu sheegayaa in mushaarka Ciidanka Uganda uu dib u dhoco,iskaba daa mushaarkee lacagaha kale ee dheeraadka ah ayey afartii bil mar qaataan,haddana uma goyso waxyaabaha aas aasiga ah ee ay u baahanyihiin.
“Mushaarkeenna waxaa naloogu sheegay $828 doollar,waxaan helnaa $628 doollar,ma weydiin karno saraakiisha halka ay qabatay lacagta kale”ayuu yiri Jimmy.
Waxaa uu soo bixiyay warqad yar,waxaa uu u dhiibay wariyaha ka socday wargeyska waxaana ku qornaa “hoo,waa kuwan dhibaatooyinka na heysta,cid wax ka qabata malahan,waan baxayaa”ayuu yiri qolkiina waa ka baxay.
Warqadda oo ay ku qorneyd Qad Buluug ah,waxaa ku qornaa nolosha maalin laha ah ee Askarta Uganda iyo dagaalka Al-shabaab.
“Somaliya waxaa ay ka mid tahay dalal yar oo Afrikaan ah oo leh dhaqan naadir ah,dhamaan waa hal Qowmiyad oo Soomaali ah,waxaa ay u kala baxaan shan qabiil oo kala” .
“Qaabkaas qabiilka ayuu ku saleysan yahay nidaamka dowliga ah ee dalka,waana waxa adkeynaya in guul la gaaro.labaatan sano ka horna waxan uunba riday dowladdii hore”.
“Halkani maaha Jamhuuriyadda Afrikada dhexe,Congo ama Suudaan, waddamadaas dadkoodu waa ay kala duwanyihiin laakiin dadka Asalka ah waa Al-shabaab,AL-shabaabkuna waa dadka asalka ah,ma weerari kartid qof kasta ilaa aad hubiso” ayuu yiri Odongo
Waxaa uu intaas ku daray “qatarta ugu weyn maha in aan ogahay cadowga ama aan ogeyn,laakiin waxaan joogaa waddan shisheeye,waxaan leeyahay qoys,waxaa ay doonayaal Biil,Carruurteydo waxaa ay doonayaan waxbarasho,waa in aysan askar noqon sida aniga oo kale,waa in aysan howlgal ku dhiman”
Maj Caesar Olweny,waa afhayeenka qeybtan ee UPDF,waxaa uu sheegayaa in cabashooyinka askarta ay ka bad badis tahay ,waxaa uu yiri “mushaarka waxaa loo bixiyaa bille, mana ogin kiisaska ay ka sheeganayaan askarteenna”.
Brig Karemire, waxaa uu sheegay in Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya uu bixiyo qalab iyo agab ku filan Ciidanka AMISOM, waxaa uu intaas ku daray in aysan jirin meel uu mallatari ka howlgalo oo Soomaaliya ka wanaagsan.
Brig Karemire,waxaa uu sheegay in dib u dhac dhinaca raashinka iyo sahayda kale ah uu jiri karo, taas oo ka dhalatay hanaanka gudbinta oo ay dhibaatooyinn ka jiraan.
Waxaa uu sheegay in hadda xal laga gaaray iyadana sababta oo ah waxaa garoon laga dejiyo sahayda AMISOM ee Shabeellaha hoose laga furay Baraawe oo 208km u jirta Muqdisho.
W/Turjumay: Adam Ibrahim Farah (Showqi)
Isha: Daily Monitor
Kan-xiga11 Qof oo ku waxyeeloowday Qarax ka d...
Kan-horeTurkiga oo ka digay cadaadiska ay wad...
38,729,243 unique visits